Ciidammada Masar oo u xadhko xidhan weerar ay ku qaadaan dalka Liibiya | Berberanews.com
Home WARARKA Ciidammada Masar oo u xadhko xidhan weerar ay ku qaadaan dalka Liibiya
Ciidammada Masar oo u xadhko xidhan weerar ay ku qaadaan dalka Liibiya
Madaxaweynaha dalka Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa ku hanjabay iney suurtagal-tahay in dalkiisa qaadi doono tallaabo milatari oo lagu taageerayo janaraal Khaliifa Xaftar oo ay awooddisa hoos u sii socoto inkastoo weli uu ka amar taagleeyo magaalada sirte.
Khudbad uu telefishinka ka jeediyay ayuu Sisi ka sheegay in magaalada sirte ay masar u tahay khad cas, wuuxuna ku nuux-nuuxsaday in dhaq-dhaqaaqkasto oo ay sameeyneyso xukuumadda Qaahira ay noqon doonto mid waafaqsan sharuucda caalamiga ah.
Dowladda ay aqoonsan-tahay Qaramada Midoobay ayaa hadalka madaxaweyne Cabifataax ku tilmaantay inuu yahay ‘dagaal ka dhan ah dadka reer Liibiya’ waxayna shegtay ineysan jirin wax la yirahdo khad casaan ah oo ku yaalla gudaha Liibiya.
Ciidamada dowladda oo uu Turkiga baritaarayo ayaa ku sii siqaya magaalada Sirte iyagoo horayna ula wareegay magaalooyin muhiim u ahaa Janaraalka loo taagta-waayay.
Xulkuumadda Ankara ayaa tiri: ‘waa in Janaraal Xaftar uu isaga baxo magaalada Sirte, haddii la doonayo in la helo xabad joojin waarta’
Image captionCiidammada Haftar
Previous articleIs-barbardhig: Awoodaha milateri ee Itoobiya iyo Masar
Next articleWasiirka xannaanada xoolaha oo kormeeray Maxjarrada Berbera